လူသားမြားသညျအင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်ကျော်လွန်အောင်နိုင်လိမ့်မည်ကိုဘယ်လို - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “လူသားမြားသညျအင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်ကျော်လွန်အောင်နိုင်လိမ့်မည်ကိုဘယ်လို” ကီဗင် Fong သည်အားဖြင့်ရေးသားခဲ့, တနင်္ဂနွေ 13 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ် Observer များအတွက် 2015 08.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ယခုနှစ် တော်ဝင် Institution မှရဲ့ခရစ္စမတ်သင်ကြားနည်း လူ့အာကာသလေယာဉ်၏စိန်ခေါ်မှုမှာကြည့်ရှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကရှာဖွေရေး၏ရေကြောင်းခရီးရှည်ရက်နေ့တွင်အပြီးသတ်နယ်စပ်သို့လူသားမြားသနှင်ထုတ်ဖို့ကြာ.
ဆရာဝန်တစ်ဦးအဖြစ်ငါ UK နှင့်နာဆာရဲ့အကြားပြန်လည်နှင့်ထွက်ခရီးသွားလာထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် ဂျွန်ဆင်အာကာသစင်တာ ဟူစတန်ရှိ, အတုဆွဲငင်အားစနစ်များကိုမှဇီဝြဖစ်စဉ်အိုမင်းရက်နေ့တွင်အာကာသပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရာမှအထိစီမံကိန်းများအပေါ်တစ်ဦးလာရောက်လည်ပတ်သုတေသီအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်. တချိန်တည်းမှာပင်ငါသည်ငါ့မေ့ဆေးအတွက်အငယ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းနှင့်အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုပြီးပါကခဲ့သည်. ဒါဟာအတူတကွသူတို့အားနှစ်ဦးဘဝ splice ဖို့ကြိုးစားနေထူးဆန်းခဲ့. နေ့ချင်းညချင်းတစ်ဦးအထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ်ပေါ်အလုပ်လုပ်, အပြောင်းကုန်ပြီရဲ့အဆုံးမှာလေဆိပ်ကိုဦးတည်, လေယာဉ်ပေါ်မှာအချို့သောအိပ်ဖမ်းဆုပ်, ပြီးတော့ဟူစတန်ရှိအစည်းအဝေးတစ်ခုအခန်းအတွက်နက်ဖြန်နေ့၌ရောက်ရှိ, လူအင်္ဂါဂြိုဟ်မှလုံခြုံစွာလူပေးပို့ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာပတ်ပတ်လည်ထိုင်ကြဘယ်မှာ.
သို့သော်နှစ်ဦးနှင့်ဆက်နွယ်သောအရာအစွန်းမှာအသက်တာ၏စိန်ခေါ်မှုခဲ့သည်. ရောဂါနှင့်ဒဏ်ရာကစိန်ခေါ်လာသောအခါဆေးရုံ၌ငါ၏အသကျအစှနျးမှာရှာဖွေနေခဲ့သည်. နာဆာမှာငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏အစွန်းအားဖြင့်လူ့ဇီဝြဖစ်စဉ်မှခြိမ်းခြောက်မှုကြည့်နဲ့ကွာဝဠာခဲ့သည်.
ကျွန်တော်အစွန်းရောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြောင်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အကာအကွယ်မဲ့နဲ့လက်ခံမထားတဲ့လူ့အသက်ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတရားစီရငျခွငျးအားဖွငျ့သူတို့၏ခြိုးခြံခြွေတစ်ကြမ်းတမ်းသောစိတ်ကူးရနိုင်. သောအကျင့်အားဖြင့်အာကာသအဆုံးစွန်အစွန်းရောက်ဖြစ်ပါသည်: လူ့ဇီဝြဖစ်စဉ်မှထူးခြားရန်လို, ဒါကြောင့်သမျှသည်လူ့အသက်ကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမပံ့ပိုးပေး. အဆိုပါအကာအကွယ်မဲ့အာကာသခရီးသွားစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရှင်သန်မယ်လို့.
ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအများစုအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုကိုသည်အဘယ်သို့မှဆင်းရဲသားဒုတိယဆော့ကစား
သင်ပြုဆရာဝန်တစ်ဦးသည်အများများရှိလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးစေခြင်းငှါ, - လူ့အာကာသတူးဖော်ရေးမှကြွလာသောအခါ, နားလည်နှင့်လူ့ဇီဝြဖစ်စဉ်ကကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်လိမ့်မယ် manipulate နိုင်သူကလူ. သို့သော်ဆေးပညာဆရာဝန်တွေအများစုအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုကိုသည်အဘယ်သို့မှဆင်းရဲသားဒုတိယဆော့ကစား - ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ.
အာကာသလေယာဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိယာမအတွက် disarmingly ရိုးရှင်း. နယူတန်နီးပါးကအထောက်အကူပြုသောဒိုင်းနမစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်ခဲ့ကွောငျးတကယ်တော့ဒါရိုးရှင်းတဲ့ 400 လွန်ခဲ့သော .... နှစ်က. ကမ္ဘာမြေထားခဲ့နဲ့ပတ်လည်တစ်ဦးဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းထဲဝငျဖို့, ဒါကြောင့်ခက်ခဲကြောင့်နောက်တဖန်မြေပြင်ကိုတွေ့ကထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်လဲကျစေနိုင်ပါသည် - ဒါကြောင့်ခဲယဉ်းသည်၎င်း၏ဒုံးကျည်သွားလမ်းကမ္ဘာမြေရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထက်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်သောကမ္ဘာလုံးအနှံ့ object တစ်ခုပစ်ခြင်းငှါသင်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်.
ဒါငျသညျစွမ်းအင်တခုကြီးမားငွေပမာဏနှင့်အတူကပေးရန်ရှိသည်ကမ္ဘာမြေပတ်ပတ်လည်ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းသို့ object တစ်ခုထားရန်. ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများခုနှစ်တွင်ပိုမြန်သင်အောင်မြင်ရန်ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်း၏အချင်းဝက်အကျယ်ပြန့်သွား; ကျယ်ပြန့်လုံလောက်တဲ့ကကမ္ဘာမြေနှင့်လေထု၏အထက်ပိုင်းအလွှာနှစ်ခုလုံးကိုလက်လွတ်ရသည့်ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းအောင်မြင်ရန်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ရဖို့, ထိုကဲ့သို့တူညီသောအမြင့်မှာသငျသညျနေရာ International Space Station ကို အချို့သော 250 မိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုအထက်, သငျသညျ 17,500mph ပတ်ပတ်လည်မှာသွားလာရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ဒါကသေးငယ်တဲ့နျူကလီးယားလက်နက်များ၏ပေါက်ကွဲစွမ်းရည်နှင့်အတူအင်ဂျင်နှင့်လောင်စာသိုလှောင်ကန်များက propelled တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်လိုအပ်ပါတယ်. ဒီခရီး, အနိမ့်ကမ္ဘာမြေဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းထဲသို့ကမ္ဘာမြေရဲ့မျက်နှာပြင်မှ - ထိုသည့် Soyuz အာကာသယာဉ်တစ်စီး - ရှစ်မိနစ်ကျော်အနည်းငယ်ကြာ. ဒါကြောင့်နာဆာမှာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းရင်း, ကမ္ဘာတစ်လွှားနှင့်အာကာသအေဂျင်စီများ, ကြောင်းအတိုချုပ်ပေမယ့်အကြမ်းဖက်ကာလ၌အဘယ်အရာကိုမျှခေတ်သစ်ဆေးပညာနီးပါးရှိပါတယ်ကြောင့်ဒါခိုင်မြဲစွာမဟုတ်ဘဲလူ့ဇီဝဗေဒ၏တွေထက်အင်ဂျင်နီယာများ၏တောင်းဆိုချက်များအတွက်အမြစ်တွယ်သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏လမ်းကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်. ပစ်လွှတ်စဉ်အတွင်း, ထိုအင်ဂျင်နီယာသည်အကျင့်နှင့်လူတိုင်းဘဝတွေကိုဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ပါကမလူတိုင်းပျက်.
အဆိုပါဒုံးပျံအင်ဂျင်ဿုံမီးရမယ်, ရုံပိုင်ခွင့်အချိန်ကန့်ညာဘက်ကိုတွန်းကန်အားပို့ဆောင်, အတိအကျနည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာညွှန်ကြား. ကတွန်းအား၏ကြီးမားတဲ့အင်အားယာဉ်ကိုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုမထားရ, ၎င်း၏စနစ်များသို့မဟုတ်ခြားခရီးသည်က၎င်း၏ပျက်စီးလွယ်ကုန်တင်. ဒါဟာ launcher နှင့်မော်တော်ယာဉ်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေသောအင်အားစုများရဲ့မကျြနှာကိုဖျော်ဖြေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များ၏အလုပ်ဖြစ်ပါသည်.
ထိုအရေနံဆီနှင့်အောက်ဆီဂျင်၏ရဲတိုက်ပေါ်ကနေဆောက်ထားတဲ့သေးသေးလေးဆေးတောင့်သည်, တယ်လီဖုန်း boxes တွေကိုလက်တဆုပ်စာ၏ပမာဏနှင့်အတူ, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်သုံးခရီးသည်တန်ချိန်၏စုံတွဲတစ်တွဲသူတို့တွင်အတွက်ပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်. ဒါကဆေးတောင့်ဘဝထောက်ခံမှုသေးငယ်တဲ့ပူဖောင်းသည်, ကမ္ဘာမြေမှပယ် pinched နှင့်သူတွေဟာထိန်းသိမ်းထား. ထဲမှာ, ဆဲပိုပြီးစက်တွေ space ၏ပျက်ပြယ်ဘဝကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖိအားနဲ့နွေးထွေးမှုနှင့်အတူ breathable လေထုများကို. သင်ပစ်လွှတ်ရှင်သန်လိုလျှင်, သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုတကယ်သာကိုယ့်စတင်နေကြသည်.
မြင့်မားသောစားပွဲပေါ်မှာ: ခရစ် Hadfield နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းသင်္ဘောကြီးပေါ်သုညဆွဲငင်အားအတွက်အစာစားခြင်း. ဓါတ်ပုံ: အပေါ်
International Space Station ကို
တစ်ဦး Hi-tech အဖြစ်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း၏စဉ်းစားရန်စုံစမ်းနှောင့ဒါဟာင် Big Brother အိမ်, မြင့်မားတဲ့ကမ္ဘာမြေအထက် floating. မှန်သည်အခြို့ကိုအာရုံထဲမှာ: အသကျရှငျအခွအေနမဆိုပုံမှန်စံအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းများမှာ. အနည်းငယ်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ချမ်းသာနှင့်အဖိုးတန်နည်းနည်း privacy ကိုရှိပါတယ်. ဒါဟာကြီးမားတဲ့လူမှုရေးပဋိပက္ခများသည်အအလားအလာနှင့်အတူ bristling တစ်လူနေမှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့သိသိသာသာအကြီးအကျယ်ရှောင်ရှားနှင့်ကြောင်း 15 စစ်ဆင်ရေး၏အနှစ်မရှိနှင်ထုတ်ရှိခဲ့ပွီ.
သို့သော်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းတခုနေရာထိုင်ခင်းလုပ်ကွက်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်. အမှုထမ်းရှိပါတယ်အသက်ရှင်ဖို့သွားရတဲ့အခါသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုသောနေ့ရက်ကာလကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒုတိယမှီခိုရာပေါ်မှာစက်အတွင်း၌နေအိမ်သို့တက်ယူပြီးနေကြသည်. သူတို့ကအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်ရန်ရေ electrolyse, သူတို့ရှူရှိုက်သောလေယာဉ်ထဲကစွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့ပွတ်တိုက်မှမော်လီကျူးဆန်ခါ employ, အာဏာ 80kW ထုတ်စုပ်နိုငျသောကျယ်ပြန့်နေရောင်ခြည်သည် array ထဲကနေအပူပေးစနစ်များကို run. ဒါကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုလည်းလေးကြီးမားသော gyroscope မောင်း, တည်ငြိမ်သည့်နှင့်ဘူတာရုံခုတ်မောင်း, ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖရိုဖရဲကနေကာကွယ်ပေးနိုင်.
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းဝေးငြိမ်းချမ်းမှဖြစ်ပါသည်: ဒါကြောင့် hums နှင့်အစဉ်စွဲလမ်း whines; ပရိသတ်တွေအားလုံးအချိန်ကိုအပြေးနေကြတယ်. ဆွဲငင်အားမရှိရင်ပူလေကြောင်းမထပါဘူးနှင့်အအေးလေကြောင်းနစ်မြုပ်မပါဘူး. ရှိသည်, အကျိုးဆက်အဖြစ်, convection ကြောင့်ရွှေ့သို့မဟုတ်ရောနှောဖို့လေကြောင်းရရှိရန်ခက်ခဲကြောင်းမပါဘဲမရှိ. ဒါကအလှည့်အတွက်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ညံ့ဖျင်းလေဝင်လေထွက်ဒေသများရှိခေါင်းကိုက်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့အာကာသယာဉ်မှူးထွက်ခွာ, ကုတျကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုတက်ဆောကျနိုငျဘယ်မှာ. လေထု churning မော်တာ၏ထို့ကြောင့်ထိုစဉ်ဆက်မပြတ်စည်. ထိုနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအပေါ်မူကြမ်း, ထိုအမှုထမ်းကျန်းမာတဲ့လူနေမှုအဘို့အပျေါမှီခိုအခြားနီးပါးအရာအားလုံးနဲ့တူ, အတုများမှာ. ဒီအားထုတ်မှုအားလုံးကိုယ့်တစ်ဦးတပ်စခန်းအတွက်ဘဝထောက်ခံမှုကြောင့်ပူဖောင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပဲ 250 မိုင်ကြှနျုပျတို့ခေါငျးအထက်. ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများကို Legion နှင့်ကျွန်တော်ပင်သေးနိမ့်ကမ္ဘာမြေဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းထွက်ခွာ ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်စတင်ကြပြီမဟုတ်.
မပြီးဆုံးသေးသောလုပ်ငန်းကိုလပေါ်ရှိပါတယ်. ဒါဟာ Apollo program ကို၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တစ်ဒါဇင်ယောက်ျားဆင်းသက်ကတည်းကထက်ဝက်နီးပါးရာစုနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. And while it representsatreasure trove of scientific discovery, nobody has been back since. Low Earth orbit is 250 miles away and can be reached in minutes. The moon is about 250,000 မိုင်ပေါင်းများစွာ, takes days to get to and, in addition to isolation and the added complexity of the rocket science required, leaves crews extremely vulnerable to radiation. On Earth we’re protected from some types of radiation by the thick blanket of atmosphere above, which absorbs gamma rays, x-rays and ultraviolet radiation that would otherwise be harmful. But there’s another layer of protection that also keeps us safe: Earth’s magnetic field.
But for now it is Mars that lies at the edge of possibility, and surviving that journey presentsachallenge onadifferent scale. With Mars, the problem is distance and time. To get to the red planet you have to traverse hundreds of millions of interplanetary miles; ပို 1,000 times the distance Apollo crews travelled to the moon. With existing technology it would take between six and nine months to travel from Earth to Mars and the same again on the return leg.
ဒါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မည်သည့်မြေထုဆွဲအားဝန်မပါဘဲသုံးစွဲအချိန်အများကြီးဖွင့်. Weightlessness may look like fun, but like everything else, too much of it can beabad thing. physiologists ပထမဦးဆုံးအာကာသပတ်ဝန်းကျင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စေခြင်းငှါအဘယျအကြိုးသကျရောထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အခါ, ဘယ်သူ့ကိုမှပင်အာကာသသို့ဖြစ်မှီ, သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြွက်သားများနှင့်အရိုးဖြုန်းမယ်လို့ခန့်မှန်း. သူတို့သညျစနစ်များဆွဲငင်အားအားဖြင့်အစဉ်အမြဲသိတယ်တဲ့အားကစားခန်းမမှာကြည့်ရှုသကဲ့သို့အများကြီးရှိပါတယ်သူမည်သူမဆိုအဖြစ်ထုဆစ်နေကြတယ်, သင်ကမသုံးကြပါလျှင်သင်ကဆုံးရှုံး. ဒီအတွက်ကြောင့်, နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းယာဉ်အမှုထမ်းကအရိုးနှင့်ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုအချို့ကိုကြိုးစားကြည့်ပါနှင့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ခံနိုင်ရည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနေ့စဉ်အစီအစဉ်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုလက်အောက်ခံရမယ်.
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ဘဝရှိ၏? စီးဆင်းနေသောရေ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြဟန်ရသောဂြိုဟ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမှောင်မိုက်အလင်းတန်းများဖြာ. ဓါတ်ပုံ: နာဆာ / Reuters သတင်းဌာနကို
ပိုများသောမကြာသေးမီက, new – and potentially more worrying – problems have cropped up. For reasons that are not yet entirely clear the pressure in some astronauts’ brains appears to rise asaconsequence of space flight, and this has been linked to alterations in their eyesight that sometimes persist for many years after their return to Earth. This phenomenon has only been noticed after long duration missions, which highlights the message: spendingalot of time in space isn’t great for your health.
But time also creates problems for life support systems. If you imagine the amount of food, ရေ, oxygen and powerasingle person might consume inamission set to last up to three years (if you include the surface stay), that demands quiteasizable larder. Now multiply that byacrew of four or six and it looks like you need an impossibly huge spacecraft just to keep you fed and watered.
How to Survive in Space will be shown on BBC4 in three parts on 28, 29 နှင့် 30 December at 8pm. Find out more on the Royal Institution’s website and join the conversation on Twitter and Instagram ကို by following @ri_science or searching for #xmaslectures
← ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရက်ပတ်လုံးကြာကြာလာပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်, သိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့ပါ ဘယ်လိုအဘယျသို့ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုထိခိုက် →